Semalt: मालवेयरबाट कसरी टाढा रहन
मालवेयर मालिसियस मालवेयर शव्दहरूबाट एक सिकिएको शब्द हो। त्यहाँ मालवेयर के गठन को रूप मा कुनै प्रतिबन्धहरु छन्। तसर्थ, मालवेयर, यसको सरल रूप मा, केहि पनि सन्दर्भित गर्दछ जुन एक व्यक्तिको कम्प्युटरमा अवैध प्रवेश प्राप्त गर्दछ। कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, तपाईंको नेटवर्कमा अवैध प्रवेश लिने सफ्टवेयरको आशय फरक हुन सक्छ। यद्यपि तपाईको विशेष कम्प्युटरमा यसको कुनै वैध उद्देश्य छैन त्यसैले किन यो मालवेयरको रूपमा वर्गीकृत हुन्छ
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, इवान कोनोवालाभ , मालवेयर घुसपैठबाट बच्न के गर्ने भनेर थाहा छ।
पहिलेका प्रकारका मालवेयर उनीहरूको विकासकर्ताहरूले उनीहरूको दक्षता प्रदर्शन गर्न प्रयास गरे र यसको लक्ष्यहरू रिसाउने काम गरे। कहिलेकाँही उनीहरूले चुटकुले पठाउन सक्छन्। पछिल्ला संस्करणहरू यो हेर्नको लागि एक हो किनकि यो अधिक खतरनाक भयो र डाटा वा नोक्सान मेटाउन वा भ्रष्ट गरेर यसलाई मेटाउन वा सम्बन्धित सफ्टवेयरबाट। समकालीन वेबमा, बजारमा अधिकांश मालवेयर प्रोग्रामहरू पैसा कमाउने उद्देश्यका लागि हुन्।
प्राविधिक रूपमा, मालवेयर एक सामान्य शब्द हो र यसले खतराहरूको धेरै प्रकारलाई सन्दर्भ गर्न सक्छ। तिनीहरूले निम्न समावेश गर्न सक्दछ:
१. तिनीहरूले भाइरसको रूपमा लिन सक्दछ जुन एक्जिक्युटेबल फाइलहरू लक्षित गर्दछ। जब प्रयोगकर्ताले सफ्टवेयर स्थापना गर्दछ, भाइरस प्रणालीमा अन्य महत्वपूर्ण फाइलहरूमा फैलिन्छ। भाइरसले केवल कम्प्युटरमा संक्रमित गर्न सक्दछ प्रयोगकर्ता द्वारा एक कार्य मार्फत ईमेल संलग्नक खोल्न जस्ता।
२. कृमिहरू मालवेयरको एक रूप हो जुन कम्प्यूटर नेटवर्कहरू मार्फत फैलिन्छ। तिनीहरूसँग भाइरससँग नजिकको समानता छ। तिनीहरूसँग अन्तरसम्बन्धित नेटवर्कहरूको एक श्रृंखलाको रूपमा इन्टरनेट द्वारा ल्याइएको असीम सम्भावनाहरूको कारण फैलिने धेरै संभावना छ।
Tro. ट्रोजन हार्स ह्याकरको आर्सेनल हो जुन उनीहरूले मालवेयर लुकाउन प्रयोग गर्थे एन्टि-मालवेयरबाट पत्ता लगाउनबाट रोक्न। तिनीहरू वैध सफ्टवेयरको रूपमा लिन्छन् जसले डाउनलोड र स्थापना गर्दा हानी गर्दछ।
R. रुटकिट्सले अपरेटिंग प्रणाली परिमार्जन गर्दछ अन्य मालवेयर लुकाउन र लुकाउन मद्दत गर्न। तिनीहरू आफैंलाई नोक्सान गर्दैनन् तर समस्याहरूको स्रोत हुन् किनकि उनीहरूले अन्य मालवेयरको पहिचान रोक्छन्।
Back. ब्याकडोरहरू देखा पर्दछ जब आक्रमणकारीहरूले प्रणालीको सुरक्षामा सम्झौता गर्छन्। तिनीहरू प्रयोगकर्तालाई पूर्ण बन्द गर्न समर्थन गर्दछन् र ह्याकरहरू द्वारा दूर पहुँचको प्रचार गर्दछन् जसले तिनीहरूलाई अन्य मालवेयर स्थापना गर्न सजिलो बनाउँदछ।
Spy. स्पायवेयर मालवेयरको अर्को प्रकार हो जुन व्यक्तिगत जानकारी चोर्नको इरादाको साथ प्रयोगकर्ता गतिविधि बारे जानकारी संकलन गर्दछ।
Mal. मालवेयरको अन्तिम प्रकार एडवेयर हो जुन आफैंमा पपअप अफर नि: शुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, तिनीहरू एक तरीका हो जसमा कम्पनीहरूले विकास लागतहरू पुन: प्राप्ति गर्न लागत घटाउन सक्छन्।
मालवेयर बेवास्ता गर्दै
मालवेयर बेवास्ता गर्ने सुनौलो नियम भनेको सफ्टवेयर खोल्ने वा स्थापना गर्ने कुराको सफा राख्नु हो वा केहि स्रोत जसको निर्धारण वा अप्रमाणित हो। यदि एक वेबसाइटमा समाप्त हुन्छ जुन उनीहरूसँग परिचित छैनन्, तिनीहरूले योबाट केहि पनि डाउनलोड नगर्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ। तपाईको सफ्टवेयर र अन्य मिडिया प्राप्त गर्नका लागि मात्र स्थानहरू प्रतिष्ठित साइटहरू वा ती हुन् जुन एकसँग परिचित छ संक्रमणको जोखिम कम गर्न। यदि सफ्टवेयरसँग डिजिटल हस्ताक्षर छैन, तब त्यहाँ वेबमा यसलाई अनुसन्धान गर्ने विकल्प हुन्छ र अन्य व्यक्तिको बारेमा के भन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। कुनै रिपोर्टहरू जुन देखाउँदछ, उजूरीहरू, वा चीजहरू जुन साइटको बारेमा अनौंठो देखिन्छ यो एक्लै छोड्ने संकेतको रूपमा हुनुपर्दछ। एक थप लाभ भनेको एक इन्टरनेट छ